> Resource> Video> Olee otú iji tọghata MSWMM faịlụ na MSWMM Ntụgharị
Ebe ọ bụ na MSWMM oru ngo faịlụ kere Windows Movie Onye kere ike-eji na ihe ọ bụla ndị ọzọ ngwa, ndị mmadụ na-emekarị iji tọghata MSWMM faịlụ ka dị iche iche video faịlụ maka ojiji. N'ihi nke a, a ike ma dị mfe na-eji MSWMM Ntụgharị bụ indispensible. Ebe a, m ịme dị ukwuu MSWMM video Ntụgharị, Wondershare Video Ntụgharị (Video Ntụgharị maka Mac). Ọ bụ ike tọghata MSWMM ka fọrọ nke nta ọ bụla video usoro dị AVI, MP4, WMV, MOV, MKV, na na. N'okpuru ebe a bụ nzọụkwụ-site-nzọụkwụ ndu.
1 Save MSWMM faịlụ dị ka video faịlụ
Pịa File menu na n'elu aka ekpe nke Windows Movie Onye kere isi interface, na-aga "Open oru ngo". Mgbe ahụ, a File Open window ga-gbapụta. Ugbu a, ị nwere ike ịnyagharịa ka MSWMM faịlụ na ị chọrọ na mbubata ha. Mgbe ahụ, ịdọrọ otu n'ime dị MSWMM faịlụ ka storyboard n'okpuru. N'ikpeazụ, gaa na "Rụchaanụ Movie"> "Chekwa na kọmputa m" mbupụ a WMV video faịlụ.
2 Import video faịlụ ka a MSWMM Ntụgharị
Open Wondershare Video Ntụgharị, na n'elu-n'akụkụ aka ekpe nke nke, ị dị nnọọ nnọọ pịa bọtịnụ ịgbakwunye gị WMV faịlụ zọpụta ke nzọụkwụ 1. Mgbe ahụ, ị pụrụ ịhụ faịlụ niile e depụtara na a na ngwa akakabarede ebi ndụ.
3 Họrọ otu mmepụta format
Mepee adaala mmepụta format ndepụta ma ọ bụ pịa format oyiyi na mmepụta Format panel. Ị pụrụ ịhụ nke a ngwa si mmepụta format window dị ka ndị a.
Fọrọ nke nta niile video & audio formats, ọbụna na-ewu ewu ngwaọrụ na-ẹdude ke ya format ndepụta. Dị nnọọ na-eche free họrọ ihe ị chọrọ ka mmepụta usoro.
4 tọghata MSWMM faịlụ
Ugbu a, ị dị nnọọ see "tọghata" button na ala-nri akuku nke a video Ntụgharị 's isi interface na-amalite converting gị MSWMM faịlụ. A mgbe e mesịrị, ndị video akakabarede ga-agwụ agwụ. Kpọmkwem pịa Open nchekwa nhọrọ ịchọta converted faịlụ mgbe akakabarede.
N'okpuru enyemaka nke oké MSWMM Ntụgharị, ị nwere ike igwu gị MSWMM oru ngo faịlụ na n'ebe ọ bụla ị chọrọ.
Olee otú iji tọghata MSWMM faịlụ ka WMV / AVI / MKV / MP4 / MOV, ect
Olee otú dezie Videos na Windows Media Player
Olee otú Ikewapụ Audio si Video